အဆိုပါ Alpes DOWNLOAD - Val d'Aosta FSX & P3D - Rikoooo
အရွယ် 826 ကို MB
downloads ရယူရန္ 91 807
ဂရိတ်ဓာတ်ပုံ-လက်တွေ့ကျကျအီတလီနိုင်ငံအတွက် Val d'Aosta ၏ရှုခင်း, အဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံထူးခြားပြောင်မြောက်အရည်အသွေးဖြစ်ကြောင်း, အလုပျသပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်, ခြောသငျသညျလျော့နည်း 15 မီတာအမြင့်ကမှအစစ်အမှန်လောကရှိတူခံစားရပါလိမ့်မယ်။ အဘယျသို့လှပသောသင်ရပါလိမ့်မယ်ပျံသန်း။
Valle d'Aosta လည်းတစ်ပြည်နယ်၏ prerogatives သောသူသည်အနောက်မြောက်တည်ရှိပြီးအီတလီ၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဒို၏အထက်ချိုင့်ဝှမ်းမှလုိုက်လျောညီထွေ။ အုပ်ချုပ်ရေး, ကမြောက်ဘက် Valais (ခရိုင် d'Entremont - ဆွစ်ဇလန်) ၏ Canton နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသည်, အနောက် des က de Savoy (ပြင်သစ်), အ Piedmont ဒေသ၏တောင်ဘက်နှင့်အရှေ့ဘက်တွင်ပေးဆောင်။
ဒါဟာသူ့ရဲ့မြို့တော်, Aosta မှ၎င်း၏အမည်ကိုဆင်းသက်လာ။ ၎င်း၏မြို့သား "Valle d'Aosta ။ ထို Valle d'Aosta ၏ဧရိယာ3263.25 km2 ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာရှစ်သို့ကွဲပြား" ဟုခေါ်ကြသည်တောင်တန်း Communities "74 စုပေါင်းကျော်ပြန့်နှံ့။ ဇွန်လ 30, 2008 မှာလူဦးရေ 126,660 အကြောင်းနှင့်အတူနေထိုင်သူခဲ့သည် 90,000 ပြင်သစ်, km38.8 နှုန်း2ပုဂ္ဂိုလ်များ၏လူဦးရေသိပ်သည်းမှု။
အပိုအချက်အလက်များကိုသင်၏ "Start menu ->" တွင်တွေ့နိုင်သည် Add-ons Rikoooo -> အဆိုပါ Alpes - Val d'Aosta FSX & P3D"
သတိပြုရန်ကြီးမားတဲ့ဖိုင် 823 ကို MBထိုသို့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဥပမာ (အဘယ်သူမျှမအံ့သြဖွယ်ရှိသည်ဖို့ဖမ်းဆီး၏အချက်မှာခဏနားပြီးကျန်တာတွေကိုပြန်လည်စတင်ဖို့ကို download accelerator software ကိုသုံးစွဲဖို့အကြံပြု FlashGet).
အရေးကြီးဘယ်လိုရှုခင်းကိုအသုံးပွုဖို့? သငျသညျ Aosta (အမျိုးအစားလေဆိပ်ကနေသင်တို့ပြေးယူနိုင်ပါသည် Aosta or LIMW)
အောက်တွင်, ရှုခင်းအားဖြင့်စဉ်းစား Photo-လက်တွေ့ကျကျဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၏ဧရိယာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါအပြင်ရှိတဲ့ default ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ FSX နောက်တဖန်ပြသပါလိမ့်မယ်။